Jisos kpughere ekpere nnabata ya nke oma | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Jizọs kpughere ekpere a na-anabata nke ọma
Ekpere masịrị Jesus: Jesus, Mary, m hụrụ gị n'anya! Zoputa nkpuru obi!
Ọ bụ mgbe ahụ ka Onyenwe anyị kpaliri Nwanna Nwanyị Consolata mmụọ nsọ a dịkwa mkpa maka ụwa niile: “Jizọs, Meri, a hụrụ m gị n’anya! Zoputa nkpuru obi!
Icheta ihe Jisos gwara ya ubochi ahu nke o mere ihe mkpuchi:
"Anaghị m akpọ gị karịa nke a: omume nke na-aga n'ihu n'ihu", Sista Consolata si otú a maliteghachi ikpe ekpere a, ugboro ugboro, na nche ya niile, n'ụdị ọrụ ọ bụla mgbe ọ na-arụ ọrụ ya kwa ụbọchị. N'ihi na ọ bụ Kraịst n'onwe ya kụziiri ya ime omume nke ihe ọ kpọrọ "omume nke ịhụnanya na-adịgide adịgide" nke akọwapụtara n'okwu ndị a: "Jizọs, Meri, ahụrụ m gị n'anya! Zoputa nkpuru obi! "
Onye nwe anyi kwuru banyere ekpere a.
“Gwa m, olee ekpere mara mma ị chọrọ ikpe m? - 'Jesus, Mary, ahụrụ m gị n'anya! Zoputa nkpuru obi! '- Lovehụnanya na mkpụrụ obi! Kedụ ọmarịcha ekpere ọzọ ị nwere ike ịchọ? "
Sista Consolata nnabata ekpere Jesus
"Ndụ ndị nsọ bụ ihe atụ nke ndụ nye ndị ọzọ" Ọ bụ n'okwu ndị a ka na February 8, 1995, Archbishop Kadịnal Giovanni Saldarini malitere usoro canonical maka ihe ise kpatara iti ihe, otu n'ime ndị a bụ Capuchin Poor Clare nun, Sista Maria Consolata Betrone, na Turin Italy, na Shrine of Our Lady Enyemaka nke Ndị Kraịst.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ndụ dike na nsọ nke Ohu Chineke, Nwanne nwanyị Consolata Betrone, enwere akwụkwọ magburu onwe ya akpọrọ "Jizọs rịọrọ ụwa arịrịọ" nke onye nduzi mmụọ nke Sista Consolata, Fada Lorenzo Sales dere.
The ukara usoro beatification / canonization nke Nwanne Maria Consolata Betrone meghere na 1995, na Eprel 6, 2019 Pope Francis kwadoro omume ọma nke Nwanna Nwanyị Consolata Betrone, si otu a na-enye ya aha "Venerable"
Arịrịọ maka Nwanyị Nwanyị Pompeii: Mee 8, ụbọchị onyinye, ụbọchị Meri
Oge elekere nke agụụ: nraranye siri ike nye Jizọs akpọgidere Ya n'obe
Akwụkwọ ọgụgụ Onye Kraịst: Oziọma, Nsọ, echiche Padre Pio na ekpere ụbọchị: Eprel 24, 2021
Uru Ime Mmụọ nke Chaplet nke Obi Ebere Chineke
Ekpere nke Jizọs n’onwe ya kpere gbasara ya nke Padre Pio gbasara